Home » သတင်း » Dalet ကို Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုများအတွက် Xtend Panel ကိုရည်ညွှန်းပြသ
အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန် - စက်တင်ဘာလ 13, 2017 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူသစ်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်Adobe®Premiere® Pro ကို CC ကိုများအတွက် Dalet Xtend ပေါင်းစည်းမှု panel ကIBC2017 မှာ။ Dalet Xtend metadata ကိုကြွယ်ဝပိုင်ဆိုင်မှုဖို့တိုက်ရိုက်တံခါးပေါက်ပေးနဲ့ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများဂျာနယ်လစ်များ, prep အယ်ဒီတာများ, အားကစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်အခြားသူများအဘို့အ Cross-လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ, အ Dalet က Galaxy ပေးခဲ့သည် & orchestral ပလက်ဖောင်းကို Adobe Premiere Pro ကိုအသုံးပြုသူများကချိတ်ဆက်။
Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုများအတွက် Dalet Xtend panel က၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအကြောင်းအရာတင်ပို့သည့်အခါသစ်ကို Adobe ကစီမံကိန်းကိုသော့ခတ်, Multi-sequence ကိုပို့ကုန်, တည်နေရာအမွေဥစ္စာ, Configure လုပ်လို့ရတဲ့ metadata ကိုပုံစံများအပါအဝင် Dalet က Galaxy အတွက်စီမံကိန်းကိုဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအပြည့်အဝထောက်ခံမှုကထပ်ပြောသည်နှင့်ကြီးထွားလာဖိုင်များကိုထောက်ခံမှု Dalet က Galaxy ဖို့အတွက် Adobe Premiere Pro ကိုကနေတင်ပို့သည့်အခါ။
အားလုံးအမျိုးအစားများနှင့်အရွယ်အစား၏မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးခေါင်းဆောင်ရဲ့ STARZ (USA) နှင့် FOX အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ (ဗြိတိန်, အီတလီ, ဂျာမနီ), အားကစားထုတ်လွှင့်မယ့် Fox ကအားကစား 1 (USA), မီဒီယာလုပ်ငန်းစုကြီးများ '' SBS ရဲ့ (သြစတြေးလျ) နှင့် Mediacorp (စင်္ကာပူ), post-ထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သားရဲ့ Colortime (USA), မျိုးဆက်သစ်ရေဒီယိုရဲ့ KEXP (USA) နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီသတင်းထုတ်လွှင့်မယ့် Mediaset (အီတလီ) အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ - သူတို့ရဲ့အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူအနုပညာရှင်များကချိတ်ဆက်ဖို့ Dalet နှင့် Adobe ကဖန်တီးမှု tools တွေကိုရွေးချယ်ကြစစ်ဆင်ရေးချောမွေ့နှင့် သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး။
"အတူတကွခြင်း, Adobe ကဖန်တီးမှု tools များနှင့် Dalet ပလက်ဖောင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများခြွင်းချက်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှ, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများကိုအပြည့်အဝက high-quality ဇာတ်လမ်းပြောပြအာရုံစိုက်နိုင်အောင် Workflows simplifying များကိုပေးစွမ်း"Arnaud Elnecave, VP စျေးကွက် Dalet မှာမှတ်ချက်ချသည်။
"ဒီ Dalet အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုတူ Adobe က apps များနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု CC ကိုပြီးတဲ့နောက်ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးမြှင့်ဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများဖွတစ်ခုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များကိုပေးစွမ်း"ဆူး Skidmore, Adobe ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုအတွက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကဆိုသည်။
IBC မှာ Dalet Pulse တက်ရောက်ရန်နှင့် Dalet & Adobe ကနှင့်အတူပိုမိုလေ့လာ
တစ်ခုလုံးကို Dalet အဝန်းအတူတကွဖြစ်စေသောတစ်ခုသီးသန့်ဖြစ်ရပ်အဖြစ်, Dalet Pulse ဖန်တီးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆင်နွှဲရန်ပြီးပြည့်စုံသောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ESCAP ကလပ်မှာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အခမ်းအနား၏ညနေခင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကို Join!
Space ကိုကလစ်နှိပ်, ကန့်သတ်ဒီမှာမှတ်ပုံတင်ရန်။
အဆိုပါ Dalet Xtend Module အကျဉ်း Download
Dalet နှင့်ကို Adobe ရဲ့ချောမွေ့စွာနည်းပညာပေါင်းစပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါနှင့် module ကိုအကျဉ်းကို download လုပ်ပါ:www.dalet.com/sites/default/files/Dalet%20Xtend%20for%20Adobe%20Premiere%20Pro%20-%20Module%20Brief.pdf
အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC မှာတွေ့ဆုံ Dalet
IBC Show ကိုတက်ရောက် Dalet နှင့် Adobe ကဖြေရှင်းချက်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းဖန်တီးမှုနှင့်ပူးပေါင်းမြှင့်တင်ရန်ဘယ်လိုသင်ယူဖို့တစ် Dalet ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ မှတဆင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်www.dalet.com/events/ibc-amsterdam-2017နှင့်ရပ်တည်ချက် 8.B77 ကိုဖြည့်ဆည်း။
Dalet ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးအားပူးတွဲတင်ပြထားပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ပိုမြန်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable နှင့်။ Dalet ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်သည့်အခါက, သုံးကွဲပြားပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကြသည်, ထိုသတင်း, အားကစား, အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်း, archive ကိုများနှင့်ရေဒီယိုအဘို့ပါဝါအဆုံးမှအဆုံးသို့ Workflows စွယ်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ တစ်ဦးချင်း, Dalet ပလက်ဖောင်းနှင့်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့စားသုံးမိ, QC, ပြင်ဆင်ရန်, transcode နှင့် multiplatform ဖြန့်ဖြူးအဖြစ်အရေးပါမီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် key ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူလျာထားသော applications များဆက်ကပ်။
Dalet ကုန်ထုတ်စွမ်းအား-တိုးမြှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်, Dalet က Galaxy စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) & မျိုးစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှု, metadata ကို, workflow နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်အကြောင်းအရာကွင်းဆက် unifies ကြောင်း orchestral ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသသတင်းနှင့်မီဒီယာ Workflows တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့, ဒီထူးခြားတဲ့နည်းပညာပလက်ဖောင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်စီးပွားရေးမြင်ကွင်းပေးစဉ်ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာပညာရှင်များကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ကူညီပေးသည်။
Dalet AmberFin တစ်ဦး, အရွယ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါလမ်းအတွက်ကြီးမြတ်ဓါတ်ပုံတွေကိုဖြစ်စေအဆောက်အဦဖွင့်, QC နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်, အပြည့်အဝပေါင်းစည်းစားသုံးမိနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်, အရွယ်မှာ transcoding ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏တောင်းဆိုလိုအပ်ချက် addressing, Multi-ကင်မရာစားသုံးမိ, အားကစားသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပျေါလှငျထုတ်လုပ်မှုသည်ဆန်းသစ်သော Dalet Brio ဗီဒီယိုကဆာဗာကိုပလက်ဖောင်းမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူသိပ်သည်းဆနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုပေါင်းစပ်။ ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့, Dalet Cube ကိုတစ်ဦးသတင်းကဏ္ဍဇာတ်လမ်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Dalet ကောင်းစွာစီမံကိန်းကိုကွပ်မျက်ကျော်လွန်ဖို့ကနဦးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဆင့်ဆင့်ကနေဖောက်သည်ထောက်ခံပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိနေခြင်း 17 ဗျူဟာမြောက်ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာရှပစိဖိတ်, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကတစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိရုံးများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 60 နိုင်ငံများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ထက်ပို 87 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ဖက်များ၏ကွန်ယက်တို့ပါဝင်သည်။ ဒါဟာစုပေါင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား, ထိရောက်မှုနှင့်တန်ဖိုးအတွက်အလားအလာတိုးမြှင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နိုင်ပါတယ်။
Dalet စနစ်များတီဗီရာပေါင်းများစွာနှင့်အများပြည်သူထုတ်လွှင့်အပါအဝင်ရေဒီယိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများ, (ကို ABS-CBN, ဘီဘီစီ, CBC, DR, FMM, ပြင်သစ်တီဗီ, RAI, RFI, ရုရှားယနေ့ RT ကိုမလေးရှားမှာတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာအားဖြင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုကြသည် ဗွီအိုအေ), စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်နှင့်အော်ပရေတာ (တူးမြောင်း + FOX, eTV, MBC ဒူဘိုင်း, MediaCorp, Mediaset, လိမ္မော်ရောင်, Time Warner Cable ကို, Warner Bros, Sirius XM ရေဒီယို) နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (Commons ၏ကနေဒါအောက်လွှတ်တော်, သြစတြေးလျပါလီမန်နှင့်ဗြိတိန်ပါလီမန်က ) ။
Dalet အဆိုပါ NYSE-EURONEXT စတော့အိတ်ချိန်း (Eurolist ကို C) ​​တွင်ကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်: ISIN: FR0011026749 Bloomberg သတင်းဌာန DLT: လက်ဗွေ, ရိုက်တာသတင်းဌာနက:DALE.PA.
Adobe က CES2017 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှု Workflows IBC2017 ပေါင်းစည်းမှု ပေးခဲ့သည် အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် Premiere Pro ကို က Ultra HD ဖိုရမ်	2017-09-13
ယခင်: Comprimato အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်လွှများအတွက်တိုက်ရိုက် Transcoder လွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: Tedial ကမ္ဘာ့ဖလား-Class ပေးခဲ့သည် Solutions IBC 2017 မှာရေးစင်တာအဆင့်ကိုယူ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Dalet ကို Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုများအတွက် Xtend Panel ကိုတင်ဆက်ပေးတယ်" ။ http://www.broadcastbeat.com/dalet-showcases-xtend-panel-for-adobe-premiere-pro-cc/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။